पर्यटन र होटल व्यवसायसँगै लैजान सके सुपको समृद्धि हुन्छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता पर्यटन र होटल व्यवसायसँगै लैजान सके सुपको समृद्धि हुन्छ
पर्यटन र होटल व्यवसायसँगै लैजान सके सुपको समृद्धि हुन्छ
प्रमानन्द भण्डारी, अध्यक्ष, कञ्चनपुर होटल व्यवसायी सङ्घ
कञ्चनपुरका पर्यटन व्यवसायी प्रमानन्द भण्डारी करीब ३ महीनाअघि कञ्चनपुर होटल व्यवसायी सङ्घको अध्यक्षमा चयन भएका छन् । लामो समयदेखि पर्यटन व्यवसायमा आवद्ध भण्डारी जिल्लाभर रहेका होटल व्यवसायीलाई एकतावद्ध गरी प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवम् पौराणिक महङ्खव बोकेका सम्पदाबारे होटलमा आउने पाहुनालाई अवगत गराउँदै उनीहरूको बसाइ लम्ब्याउने योजनामा छन् । होटललाई पर्यटन व्यवसायसँग जोड्न सके मात्रै जिल्लाको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने उनको धारणा छ । जिल्लाको समग्र होटल व्यवसायको वर्तमान अवस्था, जिल्लामा रहेका पर्यटकीय सम्पदाको महङ्खव, होटल व्यवसायको अवस्था, लगानी, चुनौतीलगायत विषयमा आर्थिक अभियानका वीरेन्द्र भट्टले कञ्चनपुर होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष भण्डारीसँग गरेको कुराकानी :
जिल्लामा होटल व्यवसायको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
यहाँले भनेजस्तै करीब ३ महीनाअघि मात्रै कञ्चनपुर होटल व्यवसायी सङ्घको आगामी नेतृत्वका लागि होटल व्यवसायी साथीहरूले मलाई अध्यक्षको रूपमा चयन गरेका छन् । मुलुक अहिले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजान प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा होमिएकाले यहाँका व्यवसायी पनि व्यवसायभन्दा चुनावी अभियानमा सक्रिय देखिएका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुकले स्थायी सरकार पाउने र त्यसपछि व्यवसायीमैत्री वातावरण निर्माण हुनेमा यहाँका व्यवसायी आशावादी छन् । अर्को कुरा, ५–७ वर्षअघि यहाँका होटल व्यवसायी एनजीओ–आईएनजीओको भरमा टिकिरहेका थिए, अहिले त्यो अवस्था छैन । थोरै भए पनि जिल्लामा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका कारण अब व्यवसायीले गैरसरकारी संस्थाहरूको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।
जिल्लामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन कत्तिको बढ्ने गरेको पाउनुभएको छ ?
म पर्यटन व्यवसायसँगसँगै होटल व्यवसाय पनि गरिरहेको छु । हरेक वर्ष जिल्लामा भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको मैले पाएको छु । जिल्लामा रहेका पर्यटकीय सम्पदाहरूको उचित व्यवस्थापन मात्रै हुने हो भने जिल्लाको आर्थिक समृद्धिमा पर्यटनले ठूलो योगदान पु¥याउँछ । यहाँ प्राकृतिक, सांस्कृतिक, पौराणिक र ऐतिहासिक सम्पदाहरूको यहाँ खानी नै छ । शुक्लाफाँटा, वेतकोट, झिलमिला, लाखौं भारतीयले दर्शन गर्न आउने सिद्धबाबा पनि यहीँ भएकाले बाह्यभन्दा आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या वर्षेनि बढ्दो छ । विगतमा अहिलेजस्तो बसोबासका लागि प्रशस्त मात्रामा होटल खुलेको अवस्था थिएन । अहिले थ्री स्टारसरहका होटल महेन्द्रनगरमा खुलेका छन् । होटलमा ठूलाठूला लगानी भएका छन् । जिल्लामा अहिलेसम्म झण्डै डेढ अर्बभन्दा बढी लगानी होटलमा भइसकेको छ ।
पर्यटन व्यवसायसँग जोडेर होटल व्यवसाय गर्ने हो भने व्यवसायी र यहाँका जनता दुवैलाई ठूलो आर्थिक लाभ मिल्ने देखिन्छ । यसका लागि होटल व्यवसायी सङ्घले दीर्घकालीन लाभका लागि सबै होटल व्यवसायीसँग मिलेर अगाडि बढ्ने तयारी पनि गरेको छ । पञ्चेश्वर आयोजना र महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल बन्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले निकट भविष्यमा भारतलगायत तेस्रो मुलुकका पर्यटकको आगमन बढ्ने निश्चित छ । पूर्णागिरिको दर्शनपछि सिद्धबाबाको दर्शन गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण वर्षको पहिलो सिजनमै १५ लाखभन्दा बढी भारतीय दर्शनार्थी यहाँ आउने गरेका छन् । तर, उनीहरूलाई हामीले उचित व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । यसैका लागि भए पनि सबै होटल व्यवसायलाई पर्यटनसँग जोडेर अगाडि बढ्ने योजनामा हामी छौं ।
होटल व्यवसायप्रति व्यवसायीको आकर्षण कस्तो छ ?
पक्कै पनि पछिल्लो समय जिल्लामा होटल खुल्ने क्रम जुन रूपमा बढेको छ, सोहीअनुरुप पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका होटलहरूको स्तरोन्नतिको क्रम पनि बढ्दो छ । होटल व्यवसायी सङ्घ कञ्चनपुरमा लगभग ६ सय होटल व्यवसायी आवद्ध छन् । पुराना होटल सञ्चालकले होटलमा थप लगानी गरेर स्तरोन्नति गर्दै छन् भने पाँचतारे होटल निर्माणका लागि पनि यहाँ काम भइरहेको छ । आधुनिक र सुविधासम्पन्न होटल खुल्ने क्रम पछिल्लो समय बढ्दै गएको हामीले पाएका छौं । जिल्लामा सानाठूला गरी हालसम्म डेढ अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । होटल खुल्ने क्रम बढेपछि स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना त गरेको छ नै, साथसाथै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले आफ्नो आर्थिक अवस्थाअनुसार होटलको सुविधा लिन पाउने अवस्था अहिले कञ्चनपुरमा बनेको छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव व्यवसायीले झेल्नुपरेका कारण सङ्घले तालीमको आयोजना गर्ने तयारी पनि थालेको छ । दक्ष कामदारका लागि अहिले पनि यहाँका होटल व्यवसायीले भारतकै भर पर्नुपरेको छ ।
पर्यटकको आगमन बढाउन के गर्नु आवश्यक छ ?
पर्यटकका लागि सबैभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण विषय भनेको होटल नै हो । अनि होटलले दिने सेवा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । हामीले हिजोका दिनसम्म के मात्रै बुझ्यौं भने होटल भनेको खाली दालभात विक्री गर्ने थलो मात्रै हो । तर, अहिले परिस्थिति फेरिएकाले ग्राहकको चाहनाअनुरुपको सेवा, यहाँका पर्यटकीय सम्पदाको पहिचान, होटलमा कार्यरत मजदुरको रहनसहन र आवश्यक तालीम तत्काल आवश्यक देखिएकाले यसमा हामी काम गर्न चाहन्छौं । अर्को कुरा पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्ने पूर्वाधारको खासै विकास हुन नसकेकाले यसका लागि राज्य गम्भीर हुनु आवश्यक छ । पर्यटन विकासकै लागि भनेर केन्द्रमा पर्यटन बोर्ड छ, उसले सुदूरपश्चिमको नक्सासम्म राखेको पाइँदैन । यहाँ पर्यटन बोर्डले एउटा सूचना केन्द्रसम्म राख्न मानेको छैन ।
धर्तीको टुक्रा मानिने खप्तड, विश्वरामसार सूचीमा सूचिकृत घोडाघोडी ताल, बडिमालिका, त्रिपुरा सुन्दरी, दक्षिण एशियाकै ठूलो घाँसेमैदान मात्रै नभएर बाह्रसिंगाको झुण्ड देख्न पाइने शुक्लाफाँटालगायत सम्पदा हुँदाहुँदै पनि पर्यटन बोर्ड हाम्रा लागि निरीह बनेको छ । प्रकृतिले वरदानस्वरुप दिएका सम्पदालाई राज्यका हरेक अङ्गले उत्थान गर्नुको सट्टा पश्चिममा केही छैन भन्ने गलत सूचना मात्रै दिने काम भएको हामीले पाएका छौं । यसलाई रोक्नुपर्छ र यहाँका सम्पदाको प्रचार–प्रचारमा राज्यले कञ्जुस्याइँ गर्नु हुन्न भन्नेमा हामी छौं । हामीले जिल्लामा पर्यटक भिœयाउन विभिन्न समिति पनि बनाएका छौं । होटल व्यवसायी सङ्घले एक जनालाई पर्यटन नै हेर्ने गरी जिम्मा पनि दिइसकेका छौं । हाम्रो लेबलबाट हुने काम सबै गर्ने तयारीका साथ अघि बढेका छौं ।
भारतीय पर्यटकलाई भित्र्याउन कुनै पहल गर्नुभएको छ ?
कञ्चनपुर भित्रिने सबैभन्दा बढी पर्यटक भनेकै भारतका हुन् । यसका लागि हामीले काम पनि गरेका छौं । दिल्ली, रुद्रपुर, बरेली, नैनीताल, देहरादुनलगायतका शहरमा हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म यहाँका पर्यटकीय गन्तव्यका बारेमा प्रचार–प्रचार गर्दै आएका छौं । गतवर्ष मात्रै सङ्घको आयोजनामा दिल्लीमा इण्डो नेपालको आयोजना गरेर यहाँका उत्पादन, पर्यटकीय सम्भावनालगायत विषयमा प्रचार–प्रसार गरेका थियौं । त्यसको फलस्वरुप महेन्द्रनगरबाट उत्पादन हुने विजयसालका सामग्रीको माग ह्वात्तै बढेको थियो । २/४ घण्टाको दूरीमा भारतका ठूलठूला शहर भएकाले त्यसको लाभ जिल्लाले उठाउन विभिन्न प्रयास त गरिनै रहेको छ । त्यसमा राज्यले पनि साथ दिए अझ राम्रो हुने थियो । अर्को कुरा, पर्यटक भित्र्याउने विषयमा सुदूरपश्चिमकै अग्रस्थानमा कञ्चनपुर रहेको छ । म आफैंले पनि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई लक्षित गरेर होटल जङ्गल कटेज सञ्चालनमा ल्याएको छु । जसका कारण थोरै भए पनि शुक्लाफाँटा भ्रमण गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ ।
सीमाक्षेत्रमा यहाँ भएका पर्यटकीय सम्पदाबारे जानकारी दिन सूचना बोर्ड मात्रैको व्यवस्था राज्यले गरिदिने हो भने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन सकिन्छ । यहाँका सबै विमानस्थल सञ्चालनमा आउन नसक्नु पर्यटन विकासको मुख्य बाधक बनेको छ । कञ्चनपुरको बझगाउँ विमानस्थल वन्द भएको निकै वर्ष भइसक्यो । कहीँ कतैबाट खोल्ने प्रयास भएको छैन । दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाहमा केही काम हुन सकेको छैन । छेलामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सरकारले घोषणा त ग¥यो तर वन कटानका लागि मन्त्रालयमा फाइल गएको भन्ने मात्रै सुनिएको छ, खासै काम भएको देखिँदैन । उत्पादनमूलक उद्योगको जिल्लामा खासै विकास भएको पनि पाइँदैन । दलका नेताहरुले चुनावका बेला जनतालाई ठूलै सपना देखाउने गरे पनि जितेर गइसकेपछि व्यवहारमा केही पनि गरेकोको पाइँदैन । धनगढी विमानस्थलमार्फत काठमाडौं जाने कुल यात्रुको ४०–४५ प्रतिशत त कञ्चनपुरकै छन् । यात्रु नपाउने यहाँ समस्या नै छैन् । मेरो आफ्नै टुर एण्ड ट्राभल एजेन्सी पनि छ । कति भारतीयहरू काठमाडौंका लागि धनगढी पुग्नुपर्ने अवस्था छ । हवाई कम्पनीले व्यावसायिक मुनाफाको कुनै चिन्ता नै लिनु पर्दैन बझगाउँमा विमान अवतरण गर्‍यो भने । यदि कुनै हवाई कम्पनीले बझगाउँसम्म दैनिक हवाई सेवा सुचारु गर्छ भने हामी सक्दो सहयोग गर्न तयार छौं । यात्रु नभएर खाली विमान उडाउन नदिने ग्यारेण्टी हाम्रो भयो ।